Isichumisi sokomisa kunye neicooler Series Factory | China Umanyolo wokomisa kunye neecoiler ezivelisayo zaBavelisi, abaXhasi
Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine isetyenziswa ngokubanzi ukomisa izinto kumashishini afana nesamente, eyam, ulwakhiwo, imichiza, ukutya, isichumisi esimbaxa, njl.
Umatshini opholileyo wegubu uza kuyilwa kwaye usetyenziswe kwimveliso yemveliso yezichumiso okanye i-NPK yemveliso yemveliso yesichumiso ukugqiba inkqubo epheleleyo yokuvelisa isichumisi. Inkqubo ye-Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisa Ngokwesiqhelo landela inkqubo yokomisa ukunciphisa ukufuma kunye nokwandisa amandla amasuntswana ngelixa kunciphisa ubushushu bamasuntswana.
Inkqubo ye- Umqokeleli wenkanyamba iyasebenza ekususeni uthuli olungabonakali kunye nolungelulo, oluninzi lwalo lusetyenziselwa ukususa amasuntswana angaphezulu kwe-5 mu m, kwaye isixhobo sokuqokelela uthuli esinemibhobho emininzi sine-80 ~ 85% yokususa uthuli ngokukuko amasuntswana e-3 mu m.
Umatshini we-Organic & Compound Granular isichumisi esijikelezayo sisixhobo sokwaleka ipellets ngomgubo okhethekileyo okanye ulwelo. Inkqubo yokutyabeka inokuthintela ngokufanelekileyo ukubekwa kwesichumiso kunye nokugcina izondlo kwisichumiso.
Ubushushu obuPhezulu beMizi-mveliso obukwenziweyo beFrafti yokuYila isetyenziswa ngokubanzi ekwakheni iifanitshala kunye noxinzelelo oluphezulu lokungenisa umoya. Ingasetyenziselwa ukuhambisa umoya oshushu kunye neegesi ezingonakalisiyo, ezingezizo ezenzekelayo, ezingadubuliyo, ezingazinzanga, kunye nezingaxinanisiyo. Inlet yomoya idityaniswe kwicala le fan, kwaye icandelo elilinganayo kwicala le-axial ligobile, ukuze irhasi ingene ngaphakathi kakuhle, kunye nelahleko yomoya incinci. I-fan eyilwayo eyenziweyo kunye nombhobho wokudibanisa uhambelana nokomisa isichumiso segranular.
Isitshisi samalahle esityunjiweyo luhlobo olutsha lwezixhobo zokufudumeza eziko, kunye nezibonelelo zokusebenzisa ubushushu obuphezulu, ukonga umbane kunye nokukhusela okusingqongileyo. Ilungele zonke iintlobo zesithando somlilo.
Counter Flow Umatshini okupholisa sisizukulwana esitsha sezixhobo zokupholisa ezinendlela eyodwa yokupholisa. Umoya wokupholisa kunye nezinto eziphezulu zokufuma zenza intshukumo ebuyela umva ukufezekisa ngokuthe ngcembe nangokupholisa ngokufanayo.